SomaliTalk.com » 2012 » December » 04
Home » Archive Maalinta December 4th, 2012
Waad salaamantihiin walaalaha qeymaha badan ee kuxiran websitekan qaaliga ah. Maanta iyo maqaalkeena wuxuu kusaabsanyahay caado aad ufool xun Quursi oo ubaahan in la’iska kaashado cirib-tirkeeda. Quursi? Waa qofka oo isku qanciyo inuu qofka kale kaga fiicanyahay isir,midib,diin, qaabka Allah usameeyey,lab iyo dhadig kuu yahay! Quursiga waa cudur da’ weyn oo lakowsaday Aadamaha maalintii...
Jaamacada Kismaayo oo ay ka qalin jabiyeen 94 arday
Maalintii khamiista ahayd 29/11/2012 ayaa xarunta Jaamacadda kismayo waxaa ka dhacay xaflad qalin jabin ah oo si weyn loo soo agaasimay uuna shicaarkeedu ahaa “helidda Jiir aqoon leh” , xafladaas oo ay ku qalin jabinayeen arday gaadhaysa 94 arday ayna ka soo qeyb galeen dhamaan bahda waxbarashada, ganacsatada, ururada bulshada iyo qeybaha kaladuwan ee Saxaafada. Ardayda qalin jabinaysay ayaa waxay...
Isbaaradii ugu Weyneyd Isbaarooyinka ee Magaalada Muqdisho oo la qaadey
Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ku Sugan Ex. Kontorll Afgooye ayaa Isniintii qaaday Isbaaradii Gaadiidka Lacagaha looga qaaday ee halkaas taalay.Isbaaro qaadistaas kaddib ayaa waxaa Saxaafadda halkaa kula hadlay Taliyaha Ex. Kontorool Afgooye Gaashaanle Nuur Xasan oo Saxaafadda uga warbixiyay qaabkii ay u qaadeen Isbaaradaas. Taliyaha ayaa sheegay in iyadoo la fulinayo amarkii Madaxweynaha...